Automotive Qaybo wax taaj oo kale
Electric Qaybo wax taaj oo kale
Medical caaga duritaanka
Baaskiilka Qaybo caaga
Biibiile wax taaj oo kale suurawdo
Caaga Cap wax taaj oo kale
caaga wax taaj oo kale
One Stop caaga Qaab irbado iyo Adeegga Warshadaha
Chinese Best caaga saaraha caaryada (CBPMM) waa shirkad keentay Chinese ku takhasusay berrinka ku dhex yaal of adeegyada caaryada cirbad iyo wax soo saarka caag ah. Waxaan la aasaasay sannaddii 2003 iyo hawlaha our ku salaysan yihiin baxay Shanghai, Shiinaha. Waxaan u raacaan hannaanka tayo adag iyo heerarka hawl taas oo naga mid ka mid ah bixiyeyaasha adeegga tayada ugu fiican iyo hoggaamineed ee Shiinaha ka dhigi.
CBPMM dhaqmayso heerarka tayada ee caalamiga ah oo uu leeyahay ee ISO 9001: 2005 shahaado taas oo caddayn u ah hubinta tayada our.
Waxaan bixinaa waxyaabaha kala duwan si ay macaamiisha, kuwaas oo ka mid ah wax taaj oo caag duro, wax taaj oo kale baabuurta, samaynta caaryada caag ah, wax taaj oo kale dhalada cap, samaynta caaryada electronic, dhiman ridaya, guriga qalabka caaryada, samaynta caaryada caafimaad, iyo samaynta caaryada biibiile.
Waxaan u isticmaali ugu dambeeyay iyo gobolka-of-the-art mishiino geedi socodka iyo wax soo saarka si loo hubiyo in wax soo saarka ugu wanaagsan loogu talagalay macaamiisha our qiimeeyo. CBPMM sameeyo kartaa alaabta ee shuruudaha macaamiisha gaarka ah iyo ka heli kartaa si deg deg ah iyaga.
Waxaan kibir qaataan our xirfad tacliin heer sare, u tababaran, iyo shaqaale hufan. Waxaan capacitated si ay ula kulmaan kootada 24 saacadood gudahood iyo karaa bixiyaan saamiga of caaryada caag ah si ay macaamiisha gudahood 3-5 maalmood.
Our mishiino ugu dambeeyay iyo nidaamka wax soo saarka aadka u horumarsan oo hufan noo oggolaan in ay soo saaraan alaabta tayada at a badan heerka dhakhso . Waxaan ku faanaa bixinta shubay caag shaybaarkaaga macaamiisheena in 3-5 maalmood oo kulan ku dhalmo kama dambaysta ah ee badeecada in 2 todobaad.
Our nidaamka wax soo saarka sare caawin na sii joogo ka hor tartanka in industry a cammiran.
Base Client sharfay
In mid ka mid ah soo saarayaasha hoggaamineed caaryada caag ah ee Shiinaha, CBPMM leedahay macmiil gundhig ah oo kala duwan oo sar. Waxaan la isku halleeyey by macaamiisha Chinese laakiin macaamiisha caalamka.
Qaar ka mid ah macaamiisheena turxaan bixinta waxaa ka mid ah Toyota, Honda, Nissan, Suzuki, General Motors, Ford, Audi, Volkswagen iwm Iyada oo qurbaannadeenna tayada wax soo saarka, binta tartan, adeeg heer sare ah ka dib-iibinta, iyo hab macaamilka shay-a, waxaan u dhisay a magacaabi iyo sumcad waayo, qudheenna ayaa.
Macaamiisha Our qirayaa, waxaana had iyo goor ay Iimaan inagu dhex jira, taas oo si weyn dheregto noo muujiyeen. Waxaan la kulmay shuruudaha macmiilka ee ku salaysan joogto ah sannadihii la soo dhaafay taas oo ah sababta ay u sii wadaan in ay ganacsi sameeyaan nala.
Kala duwan oo ka mid ah Service wax taaj oo kale
CBPMM waxay bixisaa noocyo kala duwan oo adeegyo ballaaran oo caaryada duro caag ah si ay macaamiisha ay. Waxaan bixinnaa adeegyo sida wax taaj oo caag duro, wax taaj oo kale baabuurta, samaynta caaryada caag ah, wax taaj oo kale dhalada cap, samaynta caaryada electronic, dhiman ridaya iwm
Waxaan bixinaa adeeg la isku hallayn karo oo sameeyo qaybaha sare sugan oo joogto ah qiimo aad u macquul ah.
Under wax taaj oo kale ah la isku duro caag ah, waxaan waxay bixiyaan adeegyo kala duwan sida wax taaj oo kale thermoplastic duro, in ka badan wax taaj oo kale, Orodyahanka qabow wax taaj oo kale duro, orodyahanka kulul wax taaj oo kale duray iwm
Khibrad Maareeyayaasha Sales
The maamulayaasha iibka ee CBPMM tacliin sare leh oo si fiican u tababaran si ay u fahmaan shuruudaha macaamiisha iyo samatabbixin alaabta oo tayo leh kuwaas oo ay buuxiyaan shuruudaha.
Waxaan wada ujeedadu of gelinaya macaamiisha ee muhimka ah ee ganacsigayaga. Our maamulayaasha iibka waxaa si fiican u yaqaanna la Ingiriisi iyo si fiican macaamiisha ee English ku hadli karin.
Tani waxay siisaa macaamiisha si fudud ku xiriiraan si afkooda hooyo nala. Waxa kale oo uu inaga caawinayaa in ay gaaraan baxay si uu saldhig macaamiisha ballaaran oo iyaga ugu adeegno si wax ku ool ah oon xaqiijinta adeega wax ku ool ah oo waqtiga macaamiisha ee luqadda ay door bidayo.
Great dib markii Service Sales
CBPMM ayaa had iyo jeer ahaa shirkadda macaamiisha shay-a. Hadafkayagu waxaa kaliya ma iibinta wax soo saarka si ay macaamiisha ah, halkii bixinta adeeg iibka la ekaan ka dib markii iyaga oo sidoo kale.
Waxaan aaminsan nahay in horumarinta iyo kobcinta cilaaqaadka muddo dheer macaamiisha si ay had iyo goor nagu soo celi, waayo, shuruudaha wax soo saarka caaryada caag ah ay.
Our ka dib markii kooxda iibka waxay bixisaa adeeg degdeg ah oo dabacsan si ay macaamiisha ku saabsan wax soo saarka ama weydiimo la xiriira taas oo laga yaabo in ay leeyihiin ka dib markii wax iibsiga noo soo saarka. Waxaan ku dadaaleynaa in ay bixiyaan adeeg-iibka dib markii dhamaystiran ah oo dhamaystiran la siiyo macaamiisha si ay u leeyihiin nabad buuxda oo maskaxdooda markii ay ka iibsato waxyaabaha our.
Copyright 2019 © CBPMM Khariidadda bogga